Halkan Kaga Bogo Dhamaan 20ka Ciyaartoy Ee Xili Ciyaareedkan Daqiiqadaha Ugu Badan Horyaalka Premier League? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kulamada La Ciyaari Doono Maalmaha Jimcaha, Sabtida Iyo Axada Horyaalka Premier League Ayaa Mar Kale Baaqan Doona Dabaylaha Laga Cabsi Qabo Dartood?
Kulamadii maanta iyo caawa la ciyaari lahaa ee horyaalka Premier league waxaa dhibaato wayn ku noqotay dabaysa xawaaraha dheer ku socota ee England ku dhufatay laakiin waxaa kulan kaliyi ka dhacay garoonka Molineux Stadium halkaas oo ay kooxda layaabka dhigaysa ee Sheffield United ay guul kaga gaadhay Bournemouth.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda xili ciyaareedkan daqiiqadaha ugu badan ka ciyaaray horyaalka Premier league ayaa kulankan qayb ka ahaa waxaana la shaaciyay 20 ka xidig ee daqiiqadaha ugu badan ka ciyaaray Premier league xili ciyaareedkan.
Wargayska Daily Mirror ayaa soo saaray 20 ka ciyaartoy ee xilli ciyaareedkan daqiiqadaha ugu badan ka ciyaaray horyaalka Ingiriiska waxaana kaalinta kowaad iyo labaad ku jira laba ciyaartoy oo ka tirsan kooxda dhibta badan ee Wolves.
Kabtanka kooxda Wolves ee Conor Coady ayaa noqday xidiga xili ciyaareedkan daqiiqadaha ugu badan ee horyaalka Premier league soo ciyaaray waxayna muujinaysaa sida uu muhiimad layaableh ugu yahay Wolves.
Da’yarkii hore ee Liverpool ee Conor Coady ayaa qaadanaya xili ciyaareed cajiib ah waxayna taasi keentay in uu daqiiqadaha ugu badan ka ciyaaray Premeir League intii xili ciyaareedkan lagu jiray. Coady waxa uu xili ciyaareedkan ciyaaray 3,510 daqiiqo oo Premier League ah.
Sidoo kale xidiga saamaynta badan ku leh kooxda Wolves ee Joao Moutinho ayaa isna noqday xidiga labaad ee daqiiqadaha ugu badan xili ciyaareedkan saftay premier League wuxuuna ciyaaray 3,221 daqiiqo.
Difaaca kooxda Liverpool ee Virgil Van Dijk ayaa noqday xidiga saddexaad ee daqiiqadaha ugu badan xili ciyaareedkan ka ciyaaray horyaalka Premeir League wuxuuna Reds u ciyaaray 3,120 daqiiqo oo kulamadii Premier League ahaa.
Laakiin waxaa layaableh in xidiga afraad iyo kan shanaad ee liiskani ay ka tirsan yihiin isla kooxda Wolves taas oo la micno ah in afar ciyaartoy oo ka mid ah shanta xidig ee xili ciyaareedkan ugu daqiiqadaha banaa Premier League ay ka tirsan yihiin kooxda Wolves.
Kooxaha Liverpool iyo Wolves ayaa muujiyay in ay ahaayeen kuwa ciyaartoy khaas ah inta ugu badan ku tiirsanaa halka Arsenal ay tahay kooxda kaliya ee wayn ee aan liiskan hal ciyaartoy ugu jirin.
Haddaba halkan kaga bogo dhamaan 20 ka ciyaartoy ee xili ciyaareedkan daqiiqadaha ugu badan ka ciyaaray horyaalka Premier league iyo kooxaha ay ka tirsan yihiin.
1-Conor Coady (Wolves) // 3,510 -daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
2-João Moutinho (Wolves) // 3,221-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
3-Virgil van Dijk (Liverpool) // 3,120-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
4-Leander Dendoncker (Wolves) // 3,038-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
5-Raúl Jiménez (Wolves) // 3,019-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
6-Harry Maguire ( Manchester United ) // 3,012-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
7-Andrew Robertson (Liverpool) // 3,004-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
8-Mohamed Salah (Liverpool) // 2,861-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
9-César Azpilicueta ( Chelsea ) // 2,810-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
10-Raheem Sterling ( Manchester City ) // 2,801-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
11-Trent Alexander-Arnold (Liverpool) // 2,795-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
12-Adama Traoré (Wolves) // 2,793-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
13-Rúben Neves (Wolves) // 2,787-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
14-Roberto Firmino (Liverpool) // 2,767-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
15-James Ward-Prowse ( Southampton ) // 2,700-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.Advertisements
16-Toby Alderweireld ( Tottenham ) // 2,700-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
17-Jonny Evans ( Leicester ) // 2,699-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
18-Jonny Otto (Wolves) // 2,684 -daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
19-Victor Lindelöf (Man Utd) // 2,676-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.Advertisements
20-Çağlar Söyüncü (Leicester) // 2,592-daqiiqo oo Premier League uu ka ciyaaray.
Kooxda Juventus Ayaa Heshiiska Sii Joogitaanka Juventus u Kordhisay Goolhayahooda Wojciech Szczesny?
Kooxda Aadan 19 Ayaa Guul Weyn Ku Bilaabatay Wareega Labaad Tartanka Rift Valley?